Haddii fikradda ah taariikh ugu horeysay ka buuxsamay dheer, joojoojiyo laga xishoodo lagana wada hadalka in ay joojiyaan ka hor inta aanay uusan ka qaadan racfaan inaad, ka dibna tixgelin qorsheyneysa taariikh ugu horeysay oo ay ku jiraan taariikhda iyo ee eeyaha. Keenida eeyaha aad ku hayn karaa ugu aamuska sirgaxan xagga gacanka oo ku siin labada eegaan gudaha ee shaqsiyad aad. Laakiin halkaas waa inaad tagtaa? Tixgeli in shan saaxiibtinimo eey taariikhda fikradaha.
Casheeyaan hudheelka wax-saaxiibtinimo eey: Goo casho makhaayad Waa fikrad fiican u-madhay ee taariikhda ugu horeysay. Hadaba waa maxay sababta aan ku darno maroojin ah waxaa si by qadeysaa makhaayad-saaxiibtinimo eey? Si aad u hesho makhaayad-saaxiibtinimo eey ka jira aaggaaga ah, isticmaasho search engine jecel yihiin ama weydii jecel yahay dukaanka Olimpico eey Talooyin.
Ka qaybgal riwaayad dibadeed: Ha ahaato cayaaray in band dabool ciyaaro ee hits ee guutooyinkiisa oo caan ama dhegaysigooda orchestra qowlad muusiko classical, dhigata riwaayad dibadeed taariikhda hore waa hab fiican oo ka mid ah eeyaha aad. Haddii ay suuragal tahay, soo dambiisha geeduhu oo ka mid ah qaar ka mid ah kugula dhaqmo-saaxiibtinimo eey, aad. Kaliya u hubso goobta bandhigga ogolaanaya eeyaha; aadan rabin in la timaaddo pooches keliya si aad u ogaato waxay u iman karin.
Baadh aad magaalada iyagoo Lugayn: Haddii hawadu waa la ogolaaday, ka dibna tixgelin kulan la qaateen eeyaha aad at a durkin caan ah iyo sahaminta aagga. Socodku waa hab dabacsan si aad u hesho in la ogaado halka uu midba midka kale ayaa sidoo kale siinaya eeyaha aad ay jimicsi. Ha illoobin bacaha dhalìtaanka ah!
La kulan ee park eey: Waayo, taariikhda marka hore aan joogtada ahayn oo degdeg ah, soo jeedin kulan la eeyaha aad ee park eey maxalliga ah. Waxaad iyo eeyaha aad ka heli kartaa jimicsi halka aan ciyaarnay kulan ee u heshaan. Kulan ee park eey ka hayo taariikhda dabacsan, aad; haddii aad ku dhuftey off, Waxaad usoo jeedin kartaa cinwaanka soo cashaynta, laakiin haddii dhimbiiluhu aadan si sax ah u duulo, waxaad kaliya guriga madaxa karaan. Ka dhig biyaha dhalada on gacanta aad iyo aad eey u, iyo laga yaabee in qaar ka mid ah kugula dhaqmo ee eeyaha aad. Ka hor inta aadan ku qabsoomayn xadhig in, inkasta oo, marka hore hubi in aad aragto haddii park eey u baahan tahay ruqsad gaar ah ama tag, ama haddii aad u baahan tahay in aad bixisid lacag ka hor.
Ka qaybgal rugta eey: Haddii ay fasalka la talooyin ku saabsan 'duyaarin' ama fasalka taam ah la eygaaga, xarunta caafimaadka diiradda-eey la leedahay taariikh waa hab fiican si aad u hesho si kasta oo kale oo ay goob raaxo leh oo dabacsan ogahay. Si aad u ogaato rugta eey ka jira aaggaaga ah, waxaad ka bilaabi kartaa hubinaya hoy xoolaha ama eey qaaska ah dukaanka maxalliga ah.
Marka la qorshaynayo taariikhda ugu horaysa ee qof gaar ah oo ay eyga, hubiyo in ay dareemaan raaxo ay canine u soo kaxaysid. Eeyaha qaarkood lagama yaabo in la ogolaaday in badnaa ama wata eeyo kale.